FAHASALAMANA SCIENCE - TELES RELAY
Ny mpanamboatra sakafom-biby dia nahatsiaro marika fivarotana sakafom-biby 17 samy hafa - ity ny lisitra feno - BGR
Ny fahatsiarovana ny sakafom-biby an-trano voapoizin'ny poizina avo lenta dia nahatratra marika malaza 20 isan-karazany. Ny orinasa ao ambadiky ny marika sakafo isan-karazany, Sunshine Mills, dia voatery nanitatra ny fahatsiarovana indray mandeha.…
Ny rano radioaktif an'i Fukushima dia azo averina ao anaty ranomasina - BGR
Ny tatitra nataon'ny haino aman-jery avy any Japon dia nanolo-kevitra fa vonona ny hanambara drafitra hanondrahana ilay rano radioaktifika ampiasaina hampangatsiahana ilay lozisialy nokleary Fukushima nopotehina hiverina any an-dranomasina ny governemanta. Hotsaboina ny rano ary…
Ilay orinasa nanao ny vaksinin'ny coronavirus tokana miaraka amin'ny vintana teorika ho ekena alohan'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana dia nanipika mazava fa tsy azo tanterahina io daty io Nilaza ny Tale jeneralin'ny Pfizer Albert Bourla fa mety hanana ny orinasany…
Ny fanadihadiana lehibe dia mitondra vaovao ratsy momba ny fanasitranana coronavirus marobe indrindra - BGR
Ny fanadihadian'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana momba ny fitsaboana COVID-19 dia nofaranana, ary nanambara fa ny remdesivir manasitrana coronavirus dia tsy afaka mamonjy ain'olona. Ny fikarohana nataon'ny OMS koa dia naneho fa tsy misy amin'ireo…
Ireo soritr'aretina coronavirus mampatahotra dia mitohy na dia efa resinao aza ny COVID-19 - BGR
Ny ankamaroan'ny olona voan'ny virus coronavirus dia ho tafavoaka velona amin'ny COVID-19, saingy marobe ireo marary no mbola miaina soritr'aretina na dia efa voadio aza ny viriosy. Ireo "lava-lava" ireo dia manohy miatrika ny soritr'aretina COVID-19 mampatahotra ho an'ny…
Dr. Fauci dia nilaza fa hisy loza voajanahary amin'ny coronavirus raha tsy mitsahatra manao izany isika - BGR
Raha toa ny vaovao farany momba ny coronavirus avy amin'ny mpanolotsaina momba ny fahasalamana ao amin'ny White House Dr. Anthony Fauci toa izay nolazainy hatrany, nandritra ny areti-mifindra coronavirus dia tsy kisendrasendra izany. Mahafinaritra ny hafatr'i Fauci…
Bill Gates dia nilaza fa tsy hahita fanafody coronavirus mihitsy isika - BGR
Mino i Bill Gates fa tsy tokony hoheverina ho “fanasitranana” ny fitsaboana ny coronavirus an'ny filoha Trump satria tsy mety amin'ny rehetra izany. Mety tsy hamongotra tanteraka ny coronavirus vaovao isika satria tsy hisy vaksinina na fitsaboana…
Ny soritr'aretina coronavirus vaovao mampatahotra dia manaitra ny dokotera - BGR
Ny soritr'aretina coronavirus vaovao hafahafa dia manaitra ny dokotera, izay tsy mbola afaka manazava ny fomba sy ny antony fiasan'ny pathogen. Ny marary sasany izay nanamarina fa voan'ny coronavirus dia nilaza fa naneno ny sofina, ary narahin'ny fahaverezan'ny sofina indraindray.…
Nilaza i Fauci fa voaporofo fotsiny fa tsy nahy ny saron-tava nanakana ny coronavirus - BGR
Nilaza ny Dr. Anthony Fauci fa ny data momba ny saron-tarehy dia "miteny ho azy" ary ny hetsika "super spreader" an'ny White House dia nanaporofo tsy nahy fa miasa ny saron-tava. Ny aretina COVID-19 an'i Trump dia mifandray amin'ny fanendrena azy…
Ity 13 taona ity dia nizaha toetra ratsy ho an'ny COVID-19 - avy eo naparitany tamin'ny fianakaviany manontolo - BGR
Ny tatitry ny CDC vaovao dia mampiseho ny habetsaky ny fihanaky ny coronavirus amin'ny toerana anatiny rehefa tsy manaraka ny fepetra fiarovana COVID-19. Ny tatitra nataon'ny CDC dia nanasongadina tovovavy iray 13 taona nanaparitaka ny coronavirus taminy…